နေလင်းအောင်: အမုန်းတရားအတွက် နှလုံးသားကို ဝန်မပိပါစေနဲ့
အမုန်းတရားအတွက် နှလုံးသားကို ဝန်မပိပါစေနဲ့
မူလတန်းပြ ဆရာမတစ်ဦးဟာ အတန်းထဲက ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းရန် ကလေးတွေနဲ့ ကစားပွဲတစ်ပွဲ ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ ဆရာမက ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ အာလူးအချို့ထည့်ပြီး ယူဆောင်လာခဲ့ဖို့ တပည့်တွေကို စေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အာလူတစ်လုံးစီမှာ ကိုယ်မုန်းတဲ့လူတစ်ဦးနာမည် ရေးထားရပါမယ်တဲ့။ ဒီတော့ ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲမှာ ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့ အာလူးအရေအတွက်ဟာ သူတို့မုန်းတီးနေတဲ့ လူအရေအတွက်အပေါ် မူတည်နေပါတယ်။
ကစားမည့်နေ့ ရောက်တဲ့အခါ ကလေးတစ်ဦးစီဟာ သူတို့မုန်းတဲ့ သူတွေရဲ့ နာမည်ရေးထားတဲ့ အာလူးတွေကို ယူဆောင်လာကြပါတယ်။ အချို့ကလေးတွေက အာလူးနှစ်လုံး၊ အချို့ကတော့ သုံးလုံး ယူဆောင်လာကြပါတယ်။ ငါးလုံးအထိ ယူဆောင်လာတဲ့ ကလေးအချို့လည်း ရှိပါတယ်။
ဆရာမက တစ်ပတ်အကြာ သွားလေရာနေရာတိုင်း (အိမ်သာထဲပင်မကျန်) အာလူးတွေထည့်ထားတဲ့ ပလတ်စတစ်အိတ်ကို သယ်ဆောင်သွားဖို့ တပည့်တွေကို စေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ကုန်ဆုံးလာတဲ့အခါ တပည့်တွေဟာ သူတို့သယ်ဆောင်လာရတဲ့ အာလူးပုပ်တွေကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မနှစ်မြို့ဖွယ် အနံ့အသက်တွေကြောင့် စတင်ညည်းညူလာတော့တယ်။
အာလူးငါးလုံးအထိ သယ်ဆောင်ရတဲ့ကလေးတွေကတော့ အာလူးအိတ်တွေရဲ့ ပိုပြီးလေးတဲ့ အလေးချိန်ကို စတင်ခံစားလာရတယ်။ တစ်ပတ်အကြာမှာ ဆရာမက ကစားပွဲပြီးဆုံးကြောင်း ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှသာ ကလေးတွေဟာ စိတ်သက်သာရာ ရသွားကြတယ်။ ဆရာမက ကလေးတွေကို မေးလိုက်ပါတယ်။
“တပည့်တို့ တစ်ပတ်အကြာ အာလူးတွေ သယ်ဆောင်သွားရတော့ ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။”
တပည့်တွေဟာ စိတ်မချမ်းမြေ့စွာနဲ့ သူတို့ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို စတင်ညည်းညူ ပြောဆိုကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ သွားလေရာအရပ်တိုင်း အာလူးတွေရဲ့ အလေးချိန်ရော၊ မကောင်းတဲ့ အနံ့အသက်တွေရော ခံစားကြရပါတယ်တဲ့။
အဲဒီနောက် ဆရာမက ကစားပွဲနောက်ကွယ်မှာ ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို စတင်ရှင်းပြပါတယ်။ “ဒါဟာ တပည့်တို့မုန်းနေတဲ့ လူတွေကို နှလုံးသားထဲ သယ်ဆောင်သွားတာမျိုးနဲ့ တူညီလွန်းလှပါတယ်။ တပည့်တို့မုန်းတဲ့ လူတွေရဲ့ အနံ့အသက်တွေဟာ တပည့်တို့ရဲ့ နှလုံးသားကို ညစ်ညမ်းစေပါတယ်။ ဒီတော့ တပည့်တို့ဟာ သွားလေရာအရပ်တိုင်း မလိုအပ်တဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုကို သယ်ဆောင်ရင်း အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။
တပည့်တို့ဟာ အာလူးပုပ်တွေရဲ့ အနံ့ကိုပင် တစ်ပတ်အကြာ သည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင် တစ်ဘဝလုံး ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာ သယ်ဆောင်သွားရမယ့် မုန်းတီးနေတဲ့လူတွေရဲ့ အနံ့အသက်တွေဟာ ဘယ်လောက်တောင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်မယ် ထင်ပါတယ်။”
ပုံပြင်က ပေးသော သင်ခန်းစာ
သင့်နှလုံးသားထဲမှာ အခြားသူတွေအပေါ်ထားတဲ့ အမုန်းတရားတွေကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါ။ အကြောင်းကတော့ သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး မလိုအပ်တဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို မသယ်ဆောင်မိဖို့ပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ အခြားသူတွေအပေါ် သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ စိတ်ထားရှိနေဖို့ပါ။ ကိုယ်မနှစ်သက်တဲ့သူတွေကိုပင် မေတ္တာထားနိုင်ပါစေ။
မေတ္တာစစ်ဆိုတာ အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိတဲ့ လူတစ်ဦးကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ မပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ဦးကို နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်မြတ်နိုးတတ်ခြင်းပါပဲ။
Ref; Do You Hate Someone? By Unknown Author
ဝန်ခံချက်။ ။ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ဆိုတုန်းက စာပုဒ်ဟာ အောက်မှာပေးထားတဲ့ စာပုဒ်နဲ့ အနည်းငယ်ကွဲလွဲပါတယ်။ မူရင်းပြန်ဆိုတုန်းက စာပုဒ်ကို ပြန်လိုချင်ပေမယ့် လင့်ခ်မသိတော့တော့ကြောင်း အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေရာ ဒီစာအတိုင်း ထွက်လာပါတယ်။ ပြန်မပြင်ချင်တော့တာကြောင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲပါက နားလည်ပေးပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
A kindergarten teacher has decided to let her class playagame. The teacher told each child to bring alongaplastic bag containingafew potatoes the next day to the class.Each potato will be givenaname ofaperson that the child hates, so the number of potatoes thatachild will put in his/her plastic bag will depend on the number of people he/she hates.
So when the day came, every child brought some potatoes with the name of the people he/she hated. Some had2potatoes; some3while some up to5potatoes.The teacher then told the children to carry with them the potatoes in the plastic bag wherever they go (even to the toilet) for 1 week.
Get rid of any hatred you might have for others in your heart, so that you won't have to carry around an unnecessary burden during your lifetime. Forgiving others is the best attitude to take! Love others, even if you don't love them…
Posted by နေလင်းအောင် at 6:21 PM